Mgbasa ozi ịde blọgụ si Guy Kawasaki | Martech Zone
Izisa ozi ọma site na Guy Kawasaki
Monday, April 30, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mmepụta: Onye na - ede blọgụ a ma ama, onye na - ere ahịa na onye ọchụnta ego Guy kawasaki, na-enye ndụmọdụ banyere otu esi ede nnukwu blog ma na-atụle otu o siri bụrụ ọkwa dị ka ọnụọgụ blogger 24 na Teknụzụ. N'ikwu okwu site n'ụlọ ya dị na California, ọ na - ezute Jennifer Jones nke Voice Voices na - ekwu na ọ na - etinye awa 2-3 kwa ụbọchị na ntanetị. Ọ bụkwa ndụdụ Robert Scoble (ọ bụ ọkwa ugbu a karịa Scoble na Technorati). Agbanyeghị na ọ naghị agụ blọọgụ ọ bụla, ọ na - ekwu na ọ na - eji nke ya RSS na-eri nri n'ụzọ okpukpe ka ị weghara nri blogger pụrụ iche.
Enwere m ike ịbụ nke gị niile maka ọnụ ala nke taa, ọnụ ala nke…
MacBookPro na friza
Mee 1, 2007 na 6: 08 PM
Dude a na-adọrọ mmasị mgbe nile ige ntị. Daalụ maka vid!
David Airey :: Ekike okike ::
Mee 3, 2007 na 9: 01 AM
Daalụ maka biputere nke a. Ọ na-atọ m ụtọ ige ntị.
Mee 3, 2007 na 11: 56 AM
Na-nnọọ, David & Kwa daybọchị! Enwere m mmasị ige ntị na Guy Kawasaki na-ekwu okwu. Ọ dị ike, na-atọ ọchị ma dịkwa ka ọ bụ nnukwu mmadụ. O doro anya na àgwà ọma ya emeela ka o nwee ezigbo ihe ịga nke ọma!
Mee 4, 2007 na 9: 11 AM
Agụrụ m ya of ya na Darren's blog, mana nke a bụ oge mbụ m nwetara Guy. Enwere m obi ụtọ na nghọta ya na nghọta ya. Ana m etinye ya na ndị m na-eri nri.
Daalụ maka biputere nke a.